म गृहिणी हुँ, मन्त्री चाहिएको छैन - RoadMapNews
विमला वली, लुम्बिनी प्रदेश सांसद
RoadMap News	प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख २३, २०७८ समय: ११:१८:३५
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपरेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनमा दिए । उनीसँग उपलब्ध ४१ सांसदको वहुमत देखाएर उनले पुनः बहुमतको मुख्यमन्त्री हुन खोज्दा दाङकी प्रदेशसभा सांसद विमला वलीले आफू एमालेमा नरहेको घोषणा गरिन् । त्यसपछि पोखरेलसँग जम्मा ४०, अर्थात् सरकार बनाउने बहुमत संख्या उपलब्ध भएन । त्यसमाथि एमालेकै नाममा निर्वाचित प्रदेश सांसद दुर्गानारायण पाण्डेयले पदबाट राजीनामा दिएपछि पोखरेलसँग उपलब्ध ४० सांसद पनि गुमेर ३९ मा झरेको थियो । तर, यसका बाबजुद पनि पोखरेलले आइतबार नै पुनः मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए । यो घटनालाई प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले पनि असंवैधानिक भनेका छन् । यसै सेरोफेरोमा अकस्मात् एमालेमा रहनेको घोषणा गर्ने सांसद विमला वलीसँग रोडम्यापले कुराकानी गरेको छ ।
० एमाले परित्याग गर्नुको कारण के हो ?
म कहिल्यै पनि एमाले थिइनँ । हो, मेरो श्रीमान् उत्तरकुमार वली एमालेको नेता हुनुहुन्थ्यो । उहाँले २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमालेकै नाममा टिकट पाएर चुनाव जित्नुभयो । तर, उहाँको निधन भएपछि रिक्त भएको स्थानमा निर्वाचन हुँदा मलाई उम्मेदवार बनाइयो । त्यसबेला म एमालेबाट हैन, नेकपाबाट उम्मेदवार बनेकी थिएँ । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसला अनुसार साविकको एमाले एमाले नै हुने र माओवादी माओवादी नै हुने कुरा हामी नेकपाका नाममा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुका हकमा स्वेच्छिक निर्णय लिने मान्यतामा अगाडि बढ्यो । यसरी नेकपाको सांसदले एमाले र माओवादीमध्ये एउटा पार्टी रोज्नुपर्ने परिस्थितिमा मैले माओवादी केन्द्र राजेकी हुँ, एमाले छाडेकी होइन ।
० तर, तपाईं त एमाले नै हुनुहुन्थ्यो नि हैन ?
होइन, म उत्तरकुमार वलीको श्रीमती र गृहिणी मात्रै थिएँ । मेरो इच्छा नहुँदानहुँदै चुनावमा उठाइयो । मैले पनि श्रीमान्को सम्मानका लागि, उहाँको आत्माको शान्तिका लागि भनेरै पार्टीको निर्णय मानेर चुनावमा उठेकी हुँ । त्यसैले म एमाले थिएनँ, एमाले नेताको पत्नीमात्रै थिएँ ।
० पतिको सम्मानका लागि चुनाव उठेँ भन्नुभयो, अहिले माओवादीमा गएर उहाँको सम्मान भयो त ?
जब म चुनावमा उठेँ, तब एमालेका केही साथीहरु त मलाई हराउन भनेर लाग्नुभयो । बरु, माओवादीका साथीहरु मलाई जिताउनका निम्ति जोडतोडसँग लाग्नुभयो । मैले जितेँ पनि । मलाई सहयोग गर्ने सबै माओवादी नै हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले अहिले दुईमध्ये एउटा पार्टी रोज्नुपर्ने भएपछि मैले माओवादी नै रोजेकी हुँ ।
० एमालेहरुले त तपाईंलाई अपहरणको शैलीमा माओवादी बनाइयो भन्दैछन् नि ?
मलाई कसैले अपहरण, प्रलोभन र धाकधम्की दिएका छैनन् । म मेरै इच्छाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) भएकी हुँ ।
० शंकर पोखरेल पनि दाङकै, तपाईं दाङकै माननीयले उहाँलाई यतिबेला धोका दिन मिल्थ्यो र ?
राजनीतिमा आइसकेपछि यो दाङको, यो रोल्पाको, यो सल्यान र प्यूठानको भन्ने हुँदैन रहेछ । मलाई उहाँको कार्यशैली पनि मन परेको थिएन । फेरि मलाई एमालेमै आउनुपर्छ पनि भन्नु भएको थिएन । एमालेका साथीहरुले त मलाई राम्रो व्यवहार गर्नुभएन । त्यसैले पनि मैले माओवादी केन्द्र राजेको हो ।
० तर, तपाईंले माओवादी केन्द्र रोजे पनि शंकर पोखरेल त फेरि मुख्यमन्त्री हुनुभयो नि हैन ?
असंवैधानिक तवरले, संसदको बहुमतबिना उहाँ जबरजस्त फेरि मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ । त्यत्रा सांसदलाई प्रहरीले दुव्र्यवहार ग¥यो । डिआइजी आफैँ आएर सांसदलाई दुव्र्यवहार गर्न भ्याए । यो राम्रो कुरा होइन । यो घटनाले लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउने काम भएको छ । हामी लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिका हिमायतीहरुलाई यो घटनाले दुःखी तुल्याएको छ ।
० भोलि फेरि चुनावमा उठ्दा एमालेको सहयोगबिना जित्न सक्नुहुन्छ ?
म एउटी गृहिणीमात्रै हुँ । एउटा परिस्थितिमा पार्टीले चुनावमा उठायो, म स्वर्गीय पतिको सम्मानका लागि चुनावमा उठेँ । म अरु साथीहरुजस्तो पूर्णकालीन राजनीति गर्ने मान्छे होइन । मलाई अहिले पनि घरपरिवार र सन्तानको सुखका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अभिभारा छ । त्यसैले फेरि पनि चुनाव नै उठ्नुपर्छ भन्ने छैन । अहिले संसदमा भएको बेला एउटा पार्टी रोज्नुपर्ने अवस्थामा मैले माओवादी रोजेकी हुँ । भोलि एमालेका साथीहरुले सहयोग गर्लान्, नगर्लान् भन्ने चिन्ता लिएको छैन । हिजो चुनाव उठ्दा पनि एमालेका सबै साथीहरुले कहाँ मलाई सहयोग गरे त ? भोलि पनि सहयोग गर्लान्, नगर्लान्, मलाई त्यो कुरा मतलब छैन ।
० माओवादीहरुले तपाईंलाई मन्त्री बनाइदिउँला भनेका थिए रे, हो ?
घर सम्हालेर बसेकी मजस्ती गृहिणी महिलालाई मन्त्री हुनुपरेको छैन । त्यस्तो सपना न मैले देखेको छु, न मलाई कसैले त्यस्तो कुरा भनेका छन् । यो सब अफवाह हो ।
० अब लुम्बिनी प्रदेशको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला ?
अहिले शंकर पोखरेलले आफू मुख्यमन्त्री हुन जुन किसिमको असंवैधानिक र हठको व्यवहार देखाउनुभयो, यसले राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिमा नैतिकताको ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ । शंकर पोखरेलजस्तो विद्वान राजनीतिक मान्छेले यस्तो अनुचित क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ भनेर हामीले सोचेकै थिएनौँ । बहुमत गुमाएपछि पनि मुख्यमन्त्री हुन्छु भन्ने कुराले उहाँको राजनीतिक पतन गराएको छ ।